Redmi Note 8 Pro – Boot Loader Unlock, Change china rom to Indo rom, TWRP, Root, etc… [ ONE } – Xiaomi Guide
Published December 16, 2019 by Thet Zaw Ko
စမ်းသပ်ကလိထားတာ Redmi Note 8 Pro မို့ အဲသည်ဖုန်းနာမည်ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်သော်လည်း ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ idea လေးတွေကတော့ အခြားသော xiaomi phones များအတွက်လည်း ကိုယ်တကယ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ idea ယူလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဉပမာ သည်ဖုန်းအတွက် TWRP က သည် file လို့ပေးထားတာကို အခြားဖုန်းများအတွက် ယူသုံးလို့တော့ မရဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် TWRP တင်မယ်ဆို အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုလေးတွေ စဉ်းစားပြီး တင်လို့ ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ idea လိုမျိုးကိုတော့ ယူနိုင်တာပေါ့ခင်ဗျာ။
ကျနော့်ဖုန်းက Redmi Note 8 Pro China version ပါ။ ဗူးဖောက်လိုက်ကတည်းက China rom နဲ့လာတဲ့ဟာပေါ့။ သည်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Global version လဲ ရှိပါမယ်။ သူ့မှာ အခြား region ကွဲတွေအနေနဲ့ EU Version, Indo Version, India Version, Russia Version ဆိုပြီးတွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။
Boot Loader Unlock လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထူးထူးထွေထွေ ပြောစရာလဲ မရှိပါဘူး။ ဘယ် xiaomi ဖုန်းမဆို လုပ်မယ်ဆိုရင် အတူတူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သည် blog ထဲမှာ လုပ်ပုံလုပ်နည်းရေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ သည် လင့်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ https://www.xiaomiguide.info/index.php/318/
BLU လုပ်ဖို့က Boot loader unlock tool ကို နောက်ဆုံးဖြစ်တာ ရှာဒေါင်းထားမယ်။ အဲသည်ထဲမှာ ပါတဲ့ drivers တွေကို computer မှာ install လုပ်ပေးထားပြီးပြီဆို ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာချိတ်ပြီး လုပ်ချင်တာလုပ်ဖို့ အဆင်ပြေပါပြီ။ ကျနော်လုပ်ချိန် ( 16-12-2019 ) မှာ Xiaomi official site မှာပေးထားတာက version 3.5.1108.44 ပါ။ လိုအပ်ပါက သည် link မှာ https://drive.google.com/open?id=1Wo6rkV6g4ECTmSUkALRouNYnygehnaX_ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Drivers တွေ install လုပ်နည်းကလည်း အထက်မှာပေးထားတဲ့ How to unlock boot loader post မှာ ရေးထားတဲ့နည်းအတိုင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ simple အဖြစ်ဆုံး၊ အလွယ်ဆုံးနည်းပါပဲ။ Tool ရပြီ၊ Drivers တွေ Install ပြီးပြီဆို Developer Option ထဲမှာ Account bind တာကနေစလို့ လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Account bind တဲ့အခါမှာ ပြလာတဲ့ message လေးကို အချို့က error လား။ လုပ်မရတော့ဘူးလားဆိုပြီး အမှတ်မှားတတ်ပါသေးတယ်။ အဲသည်ဟာက ကိုယ့်ကို အသိပေးတဲ့ message ပါ။ Boot Loader Unlock မယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီး Account bind တာ လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ဖုန်းကို Factory reset ချတာ။ ဖုန်းထဲ ဝင်ထားတဲ့ Mi Account ပြန်ထွက်တာ၊ အခြား Mi account ကို ချိန်းတာ စတာတွေကို မလုပ်ပါနဲ့ပြောတာပါ။ သည်ဖုန်းနဲ့ သည် Mi Account ဝင်ထားတာဟာ BLU လုပ်ပြီးချိန်ထိ ထားထားပါလို့ ဆိုလိုထားတဲ့သဘောပါ။ Error မဟုတ်ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းချိတ်ပြီး BLU process ပြီးသည်အထိမလုပ်နိုင်သေးချိန်မှာ Factory reset ချမိတာ၊ Mi Account ထွက်မိတာတွေလုပ်မိပါက BLU လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် သည် Developer Option ထဲမှာ Account Bind တာကို ပြန်လာလုပ်ရမယ်လို့ ဆိုထားတာပါ။ BLU လုပ်မရဘူးလို့ ဆိုလိုတာမျိုး မဟုတ်ပါ။ Account bind ဖို့အတွက် အင်တာနက်လိုပါမယ်။ Mobile data ဖွင့်ထားရပါမယ်။ WiFi နဲ့လုပ်လို့ အဆင်မပြေပါ။
Account bind ပြီးရင် ဖုန်းကို fastboot mode ဝင်၊ ကွန်ပျူတာမှာချိတ်၊ Unlock tool ကို run.. ၊ Unlock လုပ်ခိုင်းမယ်ဆို 99% မှာ ရပ်သွားပြီး ဘယ်နှစ်နာရီစောင့်ပါဆိုတာပြပါမယ်။ အဲဒါထုံးစံလိုပါပဲ။ ကျနော်လုပ်တာ 168 Hours (တစ်ပတ်) စောင့်ရပါတယ်။ ချက်ချင်းမရလို့ဆိုပြီးတော့ feel ဖြစ်နေစရာ မလိုပါဘူး 😀 စောင့်ပါဆို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖုန်းသုံးနေရင်း စောင့်နေလိုက်ရုံပါ။ အချိန်တန်ရင် ရမှာပါပဲ။ အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းအသစ်တွေမှာ ဘယ်ဟာမဆို BLU လုပ်မယ်ဆို တစ်ပတ်စောင့်ပဲနဲ့တူပါတယ်။ တော်တော်များများ Waiting time က အဲသည်လောက်ပါပဲ။ အရင်လို 360 Hours, 720 Hours စောင့်ပါဆိုတာမျိုးတွေ သိပ်မတွေ့တော့ပါဘူး။ သည် Waiting time က Account bind ပြီးချိန်ကနေစတွက်လာတာပါ။
ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာ ချိတ်ထားချိန် Unlock tool မှာ Device မတွေ့ပါဘူး ပြတာမျိုးကတော့ driver update မဖြစ်တာ၊ ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာထဲရှိ driver နဲ့ match မဖြစ်တာမျိုးပါ။ Adb, fastboot drivers တွေက Google ရှာပြီး တင်ထားလိုက်တာနဲ့ ကွန်ပျူတာက ဘယ်ဖုန်းကိုမဆို ADB device, Fastboot devices တွေအနေနဲ့ သိနေနိုင်ပါပြီ။ သည် Unlock tool သုံးပြီး သည် xiaomi phone ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ driver နဲ့သူ match ဖြစ်စေတာ ပိုအကောင်းဆုံးပါ။ အဲဒါကြောင့် Unlock tool နောက်ဆုံး version မှာပါတဲ့ driver တွေကိုပဲ သေချာသွင်းပေးထားပါလို့ ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာ ကြိုးထိုးလိုက်တာနဲ့ device ကိုလဲမသိ၊ ဖုန်းမှာ Press any key to reboot ဆိုလား 😀 အဲလိုစာတမ်းလေးပေါ်လာတာမျိုးအတွက်ကတော့ ကွန်ပျူတာမှာ USB 2.0 အပေါက်မှာပြောင်းထိုးပါ။ USB 3.0 အပေါက်တွေမှာ ထိုးလုပ်ရင် အဲလိုတွေ error ပြပါတယ်။ USB cable တွေများလို့ အဆင်ပြေရာနဲ့ ကောက်ထိုးတပ်မိလိုက်တာဆိုရင်လဲ cable ပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။ ကွန်ပျူတာက လုံးဝ latest model.. USB 2.0 ပေါက်တွေ မပါတော့ဘူးဆိုရင်လဲ USB 2.0 Hub လေးတစ်ခု ခံသုံးကြည့်ပါ.. 😀 Unlock tool မှာ Unknown Error -1 ဆိုပြီး ပြနေတတ်တာမျိုးကတော့ Unlock tool ver နိမ့်နေလို့ လုပ်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တာ များပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာလဲ ကိုယ့် MI Account မှာ ဖုန်းနံပါတ်မရှိဘူး ပြတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ အဲလိုအတွက်ကတော့ MI Account info ထဲမှ ဖုန်းနံပါတ်ပါထည့်ပေးထားလိုက်ပါ။ ကျနော်ကတော့ သည်ဖုန်းမှာ သုံးဖို့ Mi Account တစ်ခုကို email နဲ့လုပ်ခဲ့သော်လဲ ဖုန်းနံပါတ်ကိုပါ ထည့်ထားခဲ့မိလို့ အဲလိုပြတာ မကြုံလိုက်ပါ။
အခုမှ BLU လုပ်မယ်ဆိုပြီး Account bind တယ်။ Unlock tool မှာ ချိတ်ပြီး Unlock ဆိုတာနှိပ်တယ်။ 99% မှာရပ်ပြီး ဘယ်နှနာရီစောင့်ပါပြောတယ်။ စောင့်တယ်။ အချိန်တန်မှ ပြန်ချိတ်လုပ်တယ်။ BLU process ပြီးတယ်။ ရပြီပေါ့။ ဒါပုံမှန်ပါပဲ။ အကောင်းဆုံးအကြံပေးရရင်တော့ မိမိဖုန်းမှာ Data တွေရှိရင် စချိတ်စမ်းတာ မလုပ်ခင်ကတည်းက လိုသလို Backup ထားထားပါ။ တစ်ခါတလေ ကိုယ့် Mi Account ပေါ်မူတည်လို့ဖြစ်စေ၊ ဖုန်း Model ပေါ်မူတည်လို့ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်က နာရီကြည့်မယ်လေဆိုပြီး ချိတ်စမ်းတာပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတည်း Unlock success ဖြစ်သွားတာမျိုးလဲ ရှိပါတယ်။ အဲလို Success ဖြစ်သွားရင် data အကုန်ပျက်ပါတယ်။ Android version 8.1 နဲ့စလာတဲ့ MIUI rom မှန်သမျှ BLU လုပ်လို့ success ဖြစ်ရင် data ပျက်ပါတယ်။ အဲဒါလေးတစ်ချက် သတိထားစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်က နာရီပဲ ပြမှာပါ။ နောင်မှ ထပ်လုပ်ရမှာပါဆိုပြီး နာရီမှတ်ဖို့ ချိတ်လုပ်လိုက်ပေမယ့် တစ်ခါတည်း လုပ်သွားရင် ကိုယ့် data ဆုံးရှုံးတာမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒါလေး သတိထားပါ။ Unlock tool မှာလဲ Unlock စနှိပ်တာနဲ့ process % တွေမစမှီ Data ပျက်မယ်ဆိုတဲ့ warning နှစ်ခါပေးပါတယ်။ ကိုယ်လိုသလို သတိထားရအောင်ပေါ့။
သည်လောက်ဆို BLU ပိုင်းက အဆင်ပြေလောက်ပါပြီ။ firmware ချိန်းတင်မယ့်အပိုင်း ဆက်ကြတာပေါ့။ အခုဖုန်းက Original China version မို့ China (CN) rom နဲ့လာပါတယ်။ သူ့ကို အခြား rom version တွေဖြစ်တဲ့ Global, EEA (EU version), ID (Indo), IN (India) စတာတွေဆီပြောင်းတင်လို့ရပါတယ်။ အဲလို Region ကွဲထွက်တတ်တဲ့ ဖုန်းတိုင်းအတွက် မဆိုလိုပါ။ သည် Redmi Note 8 Pro အတွက်ကိုပဲဆိုလိုပါတယ်။ တင်လို့ရတယ်၊ တင်ကြည့်ကြတယ်၊ ပုံမှန်အတိုင်းတင်တာပဲလား၊ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုလေးတွေလုပ်ပြီးမှ တင်ရတာလား.. စသည်ဖြင့်တွေကို XDA Forum ထဲမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အဲသည်မှာ Tutorial ပေါင်းစုံရှိပါတယ်။ သူများလုပ်ထားတာတွေ ဘယ်လို ဘယ်ပုံတွေလုပ်လို့ အဆင်တွေပြေကြတယ်.. စတာမျိုးတွေကို လေ့လာပါ။ ကျနော် Indo version rom ကိုတင်တာကတော့ Phone နဲ့ Message app က MIUI ကဟာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြောပြောနေကြသလို Global rom ချိန်းလိုက်တာ call recorder ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက MIUI phone app ပဲဖြစ်ပြီး Google Dialer ကို မသုံးလို့ပါ။ ကျနော့်အနေနဲ့ MIUI rom နဲ့ဖုန်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့လည်း MIUI taste လေးတွေ အတိုင်းပဲ UI ကိုဖြစ်စေချင်လို့ပါ။ Android One နဲ့ Mi A1 တို့လိုကိုသုံးတုန်းကလည်း Stock မှာပါပြီးဖြစ်တဲ့ Dialer နဲ့ SMS ကို နှစ်သက်တာပါပဲ 😀 နောက်တစ်ခုက Language က English (US) ထားထားပြီး Region နေရာ Myanmar ထားထားပေမယ့် Face Unlock function မပျောက်ပါဘူး။ အခြား Global rom တွေလို India ထားထားမှ အဲဒါက ပေါ်လာတယ်ဆိုတာမျိုး မဖြစ်ပါ။ China rom မှလွဲပြီး ကျန်တာတွေသည် Google services တွေ built-in အနေနဲ့ system ပိုင်းမှာ ပါပြီးသားဖြစ်လို့ Permissions တွေ match ဖြစ်ဖို့ လိုက်ချိန်ညှိနေစရာ မလိုပဲ အဆင်သင့် လိုသလို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဉပမာ China rom မှာ Google Map Go သုံးတယ်ဆိုပါတော့။ သူက Location ကို အဓိက tracking သွားတာက Chrome browser app က Location Access တွေနဲ့သွားတာဆိုတော့ တကယ် permission တွေ သေချာချိန်ညှိလုပ်ရတာ Chrome app မှာလုပ်ပေးထားရပါတယ်။ ဒါမှ GPS က real time သေချာ အလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။ သာမာန် User တစ်ယောက်အဖို့ကြတော့ Map Go ထည့်လိုက်တယ်လေ။ China rom မှာ permission တွေ သေချာပေးရတယ်ဆိုလို့ ပေးထားပြီးပြီလေ။ Location ကမပြဘူး ဆိုတာမျိုးတွေစဉ်းစားမရဖြစ်တတ်တာပေါ့။ Chrome က CN rom ရဲ့ တစ်ပါတည်းပါတဲ့ browser မှမဟုတ်တာ။ သတ်သတ်ထည့်ပြီးမှ ချိန်ညှိပေးရမှာလေ။ China rom သုံးမယ်ဆို app တစ်ခုခု သုံးမယ်ဆိုတာနဲ့ သူနဲ့ဆက်စပ်မှုက ဘာတွေရှီပြီး ဘာတွေ ထပ်လုပ်ထားရမလဲ ဆိုတာမျိုးတွေ idea ရှိထားဖို့တော့ လိုအပ်တာပေါ့။ ကျနော် Indo rom ကို ချိန်းတင်သုံးလိုက်တာ အဲသည်လောက်ပါပဲ။ ကင်မရာကြီးက နှစ်ဆကောင်းသွားလို့၊ Battery ကြီးက တစ်လလောက်ပိုခံသွားလို့ 😀 😀 စတာတွေအတွက်မဟုတ်ပါ။ အဲဒါတွေက ဘာဖြစ်ဖြစ် အရေးမကြီးပါဘူး။ အဓိက အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ app တွေသုံးရာမှာ Google services တွေအကုန်နဲ့ integrate ကောင်းကောင်းဖြစ်ပြီး GPS လိုတွေကအစ ဖုန်းအင်တာနက်ဖွင့်ထားရင်း screen off, sleep ဖြစ်နေချိန်မှာတောင် sync ဖြစ်နေစေဖို့ Google services တွေ system ထဲမှာပါပြီးသား rom တစ်ခုကို တင်ထားလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။
China version ဖုန်းကို အခြား rom type တွေ (လူသိအများဆုံးဆို Global rom ပေါ့) ချိန်းတင်မယ်ဆို Boot loader UNLOCK လုပ်ထားဖို့ လိုပါမယ်။ အခြား rom type တွေ တင်ထားပြီးချိန် Boot loader ကို Lock ပြန်လုပ်လိုက်ဖို့၊ Lock ပြန်ဖြစ်စေမယ့်အရာတွေ ကလိဖို့ လုံးဝ လုံးဝ မရပါ။ ဒါ Redmi Note5နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ arb ပါတဲ့ဖုန်းတွေမှာ သတိထားရမယ့် အရာတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အရင်က Xiaomi က ဖုန်း model အသစ်တစ်ခုထုတ်တယ်။ China rom နဲ့ထုတ်တယ်။ နောက် Global rom ထွက်တယ်။ တင်ချင်သူ ချိန်းတင်ပေါ့။ အဲလိုစတိုင်မျိုးပဲသွားတာကနေပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာ Region အလိုက် export လုပ်တာပေါ်မူတည်ပြီး Hardware spec လေးတွေအစ ပြောင်းလဲထုတ်တာမျိုးတွေ ရှိလာသလို Security ပိုင်းဆိုင်ရာ တင်းကြပ်မှုလုပ်တာအရ rom ချိန်းတင်မယ်ဆိုလဲ လွယ်လင့်တကူ ချိန်း၊ Lock ပြန်လုပ်ပြီး China version ကို Global လိုဆိုတာမျိုး လုပ်လို့မရအောင် လုပ်လာတာမျိုးတွေကြောင့် သည်အချက်လေးတွေ သတိထားပေးပေါ့။ Mi Flash tool နဲ့ China rom မဟုတ်တာကို တင်မယ်ဆို ညာဖက်အောက်နားလေးမှာ Clean All ကို သေချာရွေးပေးပြီး တင်ဖို့လိုပါတယ်။ သတိထားပါ။ Default က Clean all and lock ပါ။ အဲဒါက rom တင်ပြီးတာနဲ့ Boot loader ကို lock လုပ်ပစ်လိုက်တာပါ။ China rom ကိုတင်ရင် အောက်မှာ ဘာရွေးထားထား အရေးမကြီးပါဘူး။ China rom မဟုတ်တာကို China version ဖုန်းမှာတင်မယ်ဆိုရင် သည် Option ရွေးတဲ့နေရာ သတိထားပေးပါ။ တင်ဖို့မလောပါနဲ့။ အချို့ဖုန်းတွေကတော့ lock ပြန်လုပ်ပြီးတင်မိတာကြောင့် Recovery ထဲဝင်နေပြီးမတက်တာမျိုးကြုံရင် fastboot mode ထဲပြန်ဝင်ပြီး အရင် BLU လုပ်ခဲ့တဲ့ Mi Account ကိုပဲသုံးလို့ BLU tool မှာ Unlock ထပ်လုပ်ပေးလိုက်ရင် ပြန်တက်လာပါတယ်။ အချို့တွေကတော့ 9008 Mode ကနေမှ firmware ပြန်တင်ရဖို့နည်းလမ်းပဲရှိပြီး 9008 ကနေပြန်တင်ရပါတယ်။ အဲသည်မှာ Authorized Mi Service Account ဆိုတာမျိုးတွေ လိုလာပြီး သာမာန် user အဖို့ အဲသည် account မရှိရင် အလွယ်ပြန်တင်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ သည်တော့ Mi Flash tool နဲ့ rom တင်ရင် သတိထားပေးပါ။
ကျနော် သည် post ထဲမှာ Redmi Note 8 Pro ကို fastboot rom တင်ဖို့ ဘာ tool မှသုံးမနေပါဘူး။ fastboot rom ဒေါင်းမယ်။ ဖြည်မယ်။ ပြီးရင် rom တင်ရာမှာ ထိန်းချုပ်တဲ့ file တစ်ခုဖြစ်တဲ့ flash_all.bat ဆိုတဲ့ file လေးကိုသုံးပြီးပဲ တင်လိုက်တာကို လုပ်ပါမယ်။
Fastboot rom ကိုဒေါင်းဖို့ သည် website ကိုသုံးပါ။ အဲသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာဖုန်း model အလိုက်အတွက် rom အစုံရှိပါတယ်။ China လား၊ Global လား၊ EEA, RU, IN စသည်ဖြင့် ဖုန်း model ပေါ်မူတည်ရှိပါမယ်။ fastboot rom လား၊ recovery rom လား၊ EU လို custom rom လား၊ ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် TWRP လား၊ စသည်ဖြင့်တွေ အစုံစုစည်းပေးထားတယ်။
Fastboot rom ကို 7Zip သုံးပြီး ဖြည်ယူတဲ့နည်း သည်အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်မှာ လေ့လာပါ။ ဖြည်လို့ ရလာတဲ့ folder ကို C:\_ or D:\_ ထဲတွင်သာထားပေးတာ ပိုအကောင်းဆုံးပါ။ အခြား ဘယ် folder အောက်မှာမှမထားပါနဲ့။ သူ့ img file တွေရေးဖို့ ရှာတဲ့နေရာလုပ်တဲ့နေရာ path လမ်းကြောင်းမှာ spaces တွေပါလို့မရပါ။ ဖြည်လို့ရလာတဲ့ folder ဟာ နာမည်ရှည်ပေမယ့် spaces တွေ မပါပါ။ သည်တော့ အဲသည် folder ကြီးကို C:\_ or D:\_ ထဲ ထားပေးလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ Redmi Note 8 Pro ရဲ့ fastboot code name သည် begonia ဖြစ်ပါတယ်။
bat files လေးတွေ သဘာဝ အနဲငယ်လေ့လာကြတာပေါ့။
flash_all.bat အလုပ်လုပ်တာသည် ဖုန်းထဲ data အကုန်ပျက်မယ်။ rom ကိုတင်လိုက်မယ်ပေါ့။ Mi Flash Tool option မှာ Clean All ကိုရွေးထားရင် သည် file ကို ခေါ်ပြီး အလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါ ကျနော်တို့ fastboot rom တွေကို clean တင်ချင်ရင်သုံးတာပါပဲ။ အခု post မှာလုပ်သလိုမျိုး rom type ချိန်းမယ်။ Boot loader lock လဲ ပြန်မဖြစ်အောင်ဆို ဒါကိုသုံးပါတယ်။
flash_all_except_data_storage.bat ကတော့ rom တင်မယ်။ ဖုန်းထဲက data တွေကတော့ မပျက်ဘူး။ Mi Flash Tool option မှာ Save User Data ကိုရွေးထားရင် သည် file ကို ခေါ်ပြီး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သည်ကောင်အသုံးဝင်တာက root app တွေ ဘာတွေနဲ့ကလိဖို့ ဖုန်းက မတက်တော့ဘူး ဆိုတာမျိုးတွေမှာ လက်ရှိ rom version or သူ့ထက်မြင့်တာကို (Same rom type) တင်တာမျိုးအတွက်ပဲ data မပျက်ပြန်တင်ဖို့ အသုံးကျပါတယ်။ Global to China, China to Global, Stable version to Developer (beta) version, Custom to official rom.. စသည် စသည်မျိုးတွေ လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ No ပါ။ Clean All (flash_all) သည်သာ error clean အဖြစ်ဆုံးပါ။
flash_all_lock.bat ကတော့ flash_all နဲ့တူတူပါပဲ။ data အကုန်ပျက်။ rom တင်။ ထပ်ထူးတာက တင်ပြီးတာနဲ့ Boot Loader Lock ပစ်လိုက်တာပါ။ Mi Flash Tool မှာ Clean All and Lock ကိုရွေးထားရင် သည် file ကိုခေါ်ပြီး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တင်ချင်တဲ့ rom အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး သတိထားပါ။ သည် post မှာလို China version ဖုန်းကို အခြား rom တွေ ချိန်းတင်ဖို့ Boot loader lock လုံးဝ ပြန်ဖြစ်လို့မရပါဆိုတာ မှတ်သားထားပါခင်ဗျာ။
ကဲ.. rom တင်ရင် safe ဖြစ်ဖို့ ARB (Anti Rollback) ဆိုတာလေးကို သတိထားကြည့်ဖို့လိုလာပြီပေါ့။ Redmi Note5ကနေစပြီး နောက်ပိုင်းတွေမှာ သည် ARB နဲ့ MIUI Version နှိမ့်တာ၊ rom ပြောင်းတာတွေကို ထိန်းချုပ်တာမျိုး ဖြစ်လာတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် MIUI rom တစ်ခုကိုတင်တော့မယ်ဆို အရင်ဆုံး စစ်ကြည့်လိုက်သင့်ပါတယ်။ (သည်နေရာမှာ Command Prompt ကိုဖွင့်၊ သည် command ကိုရိုက်၊ ဒါပြလိမ့်မယ်.. စသည်ဖြင့်တွေ ပြထားတာတွေ့လာပါမယ်။ Post အထက်ဆုံးနားမှာ ညွှန်းပေးထားတဲ့ How to unlock boot loader post ကို သေချာဖတ်လုပ်ခဲ့ရင် ဒါတွေ အဆင်ပြေပြေဖြစ်မှာပါ။ အဲလိုမလုပ်ခဲ့ရင်တော့ command တော့ရိုက်တာပဲ။ ပေါ်လာတာမတူဘူး ဆိုတာမျိုးတွေ ကြုံရပါမယ်။ အဲသည် post ကိုသေချာဖတ် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါ။)
ဖုန်းထဲမှာ အခုတင်ထားတဲ့ MIUI rom အရ ဖြစ်နေတဲ့ ARB နံပါတ်ကိုစစ်ရန် command prompt ဖွင့်ပြီး fastboot getvar anti ဆိုတဲ့ command ရိုက်ပါ။ နံပါတ်တစ်ခုပြပါမယ်။ အဲဒါ လက်ရှိဖုန်းထဲက နံပါတ်ပါ။ ကျနော်တို့သိရမှာက တင်မယ့် rom ရဲ့ ARB နံပါတ်သည် အဲသည်ဖုန်းထဲဟာနဲ့ တူချင်တူ၊ မတူရင် ကြီးရပါမယ်။ ဒါဆို တင်လို့အဆင်ပြေပါမယ်။ တင်ချင်တဲ့ဟာက ငယ်နေရင် တင်လို့မရနိုင်ပါ။ ဒါက Official MIUI ROM အတွက်သတ်မှတ်ချက်ပါ။ Pixel rom ကဲ့သို့ MIUI based မဟုတ်တဲ့ custom rom များမှာတော့ သည် arb က ချွင်းချက်ပါ။ Rom လုပ်ပေးသူက သူ့ rom ကို သည် TWRP ကနေ သည်လိုပုံစံတင်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုထားရင် အဲသည်အတိုင်း လုပ်လိုက်တာ အဆင်ပြေဆုံးပါပဲ။ MIUI based လုပ်ထားတဲ့ MIUI PRO, ROS, EU စတဲ့ custom rom များအတွက်ကတော့ ROM ထုတ်ပေးသူရဲ့ arb နဲ့ပတ်သက်ပြီး ညွန်ကြားထားချက်တွေ၊ မိမိလုပ်နေကြနေပြီမို့လို့ ရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအပေါ်မူတည်လို့သာ လုပ်ပါ။
အခုပုံအရ ဖုန်းရဲ့ လက်ရှိ ARB နံပါတ်သည် 1 ဖြစ်ပါတယ်။ သည်တော့ တင်ချင်တဲ့ rom ထဲက ARB နံပါတ်ကိုကြည့်ပါမယ်။ အဲဒါကို ကိုယ်တင်မယ့် rom ကိုဖြည်ထားတဲ့ folder ထဲက bat file တွေထဲမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က သည် fastboot rom တွေတင်ရာမှာ clean ဖြစ်အောင်ပဲ တင်တာတွေလုပ်မှာမို့လို့ flash_all.bat file နဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုပဲ အဓိက ကြည့်သွားပါမယ်။ ကိုယ် rom ဖြည်လို့ရလာတဲ့ folder ထဲက flash_all.bat ကို Notepad++ လို editor မျိုးနဲ့ဖွင့်ပါ။ အဲသည် software မရှိရင် Google ကနေရှာဒေါင်းထည့်ထားပါ။ Windows မှာပါပြီးဖြစ်တဲ့ Notepad လိုဟာထက် ကြည့်ရတာ၊ ပြင်ရတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ script ရဲ့ အလုပ်လုပ်သွားပုံသဘောတရားကို ပြောပါမယ်။ script ရေးထားတာ detail ကိုတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ မိမိဖာသာ ဝါသနာပါရင် Google search ပြီး ဖတ်မှတ်လေ့လာလို့ရပါတယ် 😀
Line no 1 က လုပ်တဲ့ဟာကတော့ ကျနော်တို့ ဖြည်ထားတဲ့ rom folder ထဲက images folder ထဲမှာ anti_version.txt ဆိုတာ ရှိလား။ ရှိရင် အဲသည်ထဲက နံပါတ်ကို ဖတ်မယ်။ ပြီးရင် CURRENT_ANTI_VER ထဲ မှတ်မယ်လုပ်တာပါ။ ကျနော်တို့ Images folder ထဲသွားကြည့်ရင် အဲသည် txt file လေးရှိပါတယ်။ ဖွင့်ကြည့်ရင် 1 ဆိုတာလေးတစ်ခုတွေ့မှာပါ။ အဲဒါတော့ မိမိဖာသာ ဝင်ကြည့်ပါ။ သည်မှာတော့ Screen shot မပြတော့ပါဘူး။ သည်တော့ CURRENT_ANTI_VER သည် 1 ပေါ့။ သည် CURRENT_ANTI_VER သည် rom ရဲ့ ARB နံပါတ်ကို သိမ်းထားတာလို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ( CURRENT_ANTI_VER =1 )
Line2ကတော့ CURRENT_ANTI_VER ထဲ ဘာမှမရှိရင်0လို့ သိမ်းထားတာပါ။ ကျနော်တို့ဖုန်းရဲ့ rom အရ images folder ထဲမှာ anti_version.txt လေးရှိတယ်။ အဲသည်ထဲက တန်ဖိုးကိုလည်း (လက်ရှိ rom အတွက် 1) သိမ်းထားခဲ့ပပြီမို့ Line2အလုပ်လုပ်တဲ့ effect မရှိတော့ပါ။
Line3ကတော့ ဖုန်းထဲက ARB နံပါတ်ကို စစ်လိုက်တာပါ။ ကျနော်တို့ အထက်မှာ ရိုက်စစ်ခဲ့တဲ့ fastboot getvar anti ဆိုတာကိုသုံးစစ်လိုက်တာပါ။ ရလာတဲ့နံပါတ်ကို version ဆိုတဲ့ variable ထဲသိမ်းလိုက်တာပါ။ လက်ရှိသည်ဖုန်းရဲ့ အခြေအနေရ 1 ပေါ့။ သည်တော့ version = 1. Line4ကတော့ fastboot getvar anti နဲ့စစ်လို့ ဘာမှရမလာဘူး။ မိမိဖာသာရိုက်စစ်ရင် ဘာမှမပြဘူးဆိုတာမျိုးဆို version=0 လို့ထားလိုက်တာပါ။ အခုအခြေအနေအရတော့ Line3မှာ version = 1 ဖြစ်ခဲ့လို့ Line4အလုပ်လုပ်တဲ့ effect မရှိတော့ပါ။
Line5က anticheck ဆိုတဲ့ variable ထဲ “antirollback check pass” လို့ လောလောဆယ် သတ်မှတ်ပေးထားလိုက်တာပါ။ Line6မှာတော့ Line3or4ကနေရလာမယ့် version ဆိုတာတန်ဖိုးရယ် Line 1 or2ကနေရလာမယ့် CURRENT_ANTI_VER ရယ်ကို တိုက်စစ်တာပါ။ ဖုန်းထဲကရလာတဲ့ version က rom ထဲကရလာတဲ့ CURRENT_ANTI_VER ထက် ကြီးနေရင် သည် rom တင်မရပါဘူး။ ARB သဘောတရားမှာက ROM ထဲက ARB နံပါတ်က ဖုန်းထဲကဟာနဲ့ တူချင်တူ ကြီးချင်ကြီး။ ဖုန်းထဲကဟာထက် ငယ်လို့မရပါဘူး။ သည်တော့ ဖုန်းထဲကဟာက ကြီးနေရင် Line5မှာ ခဏမှတ်ထားတဲ့ anticheck ထဲမှာ အရင် pass တယ်လို့လုပ်ထားတာကနေ “Current device antirollback version is greater than this package”လို့ ပြောင်းပစ်လိုက်ပါတယ်။
Line7ကတော့ ARB စစ်တာ ဆေးတာ နောက်ဆုံးအချုပ်ပါ။ Line5မှာ မူလသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း pass ဆိုတဲ့စာသားမရှိတော့ရင် “Antirollback check error” ဆိုတဲ့ msg ပြပြီး ဘာမှမရေးပဲ ထွက်မှာပါ။ Line7မှာ ထွက်တာမဖြစ်ရင်တော့ အောက်ကလိုင်းတွေဟာ img file တွေ ရေးတာတွေဖြစ်နေပါပြီ။ firmware တင်သွားတော့မှာပါ။
သည်တော့ သည်ဖုန်းထဲကဟာနဲ့တင်မယ့်ဟာ စစ်မယ်ဆိုရင် Line6မှာ စစ်ပါတယ်။ ဖုန်းထဲကဟာ version = 1, rom ထဲကဟာ CURRENT_ANTI_VER = 1 ဆိုတော့ version သည် CURRENT_ANTI_VER ထက်မကြီးပါ။ သည်တော့ Line5မှာ ထားထားတဲ့ anticheck ဟာ သည် စာသား “antirollback check pass” အတိုင်းပဲရှိနေပါမယ်။ သည်တော့ Line7နေရာရောက်ရင် anticheck ထဲ pass ဆိုတဲ့စာသားပါနေဆဲဖြစ်တာကြောင့် ထွက်တာမလုပ်တော့ပါ။ အောက်ပိုင်း cmd တွေဆက်အလုပ်လုပ်ပြီဖြစ်လို့ Img file တွေ ရေးပါပြီ။
အထက်မှာ ARB စစ်တာတွေ ရေးပြထားတာသည် ဘယ်လိုတွေစစ်တယ်ဆိုတာ သိအောင်ရှင်းပြထားတာပါ။ မိတ်ဆွေတို့ သတိထားကြည့်ရင် fastboot rom တွေကို BLU လုပ်ပြီး Mi Flash နဲ့ပဲတင်တင်၊ Mi Flash မသုံးပဲ အခု post မှာ ဆက်ရေးပြသလိုပဲတင်တင်၊ ဘာမှမသိလဲ တင်သာတင် ARB နဲ့ပတ်သက်တဲ့ error ကင်းတယ်ဆိုတာ တွေ့မှာပါ။ 😀 😀 ကျနော်က သဘာဝလေးတွေ အောင် ရေးပြတာပါ။ fastboot mode ကတင်တာသည် အထက်မှာပြောထားခဲ့တဲ့ bat file လေးတွေထဲကအတိုင်း အလုပ်လုပ်တာဖြစ်လို့ အခုလိုတွေ အလိုလိုစစ်ဆေးပြီး pass မှ တင်ပါတယ်။ သည်တော့ ကိုယ်က ARB တွေနားမလည်လည်း firmware စရေးပြီဆိုတာနဲ့ pass ဖြစ်လို့တင်သွားပြီ။ ARB ကိစ္စပူစရာမရှိလို့မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ARB ကြောင့် error ဖြစ်နိုင်တဲ့ rom ဆိုလဲ အစပိုင်း lines တွေစစ်ကတည်းက pass မဖြစ်ပဲ ဘာမှမတင် ထွက်သွားမှာပါ။
ARB ကြောင့် brick ဖြစ်နိုင်တာသည် fastboot mode ကနေတင်တာမဟုတ်ပဲ 9008 ကနေတင်တာမျိုးမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 9008 mode ကတင်တာသည် bat file ထဲက cmd တွေ ညွန်ကြားချက်အတိုင်းလုပ်တာမဟုတ်ပါ။ ဒါကလဲ သာမာန် user တစ်ယောက် 9008 ကနေတင်ဖို့ အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေအတွက် အလွယ်မဟုတ်တော့လို့ သိပ်တော့ ပူစရာမလိုဘူးပေါ့။ အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ TWRP ကနေ Official rom တွေ တင်တာပါပဲ။ TWRP တွေမှာ ARB စစ်နိုင်တာ မပါပါဘူး။ ARB စစ်နိုင်တဲ့ TWRP တွေရှိပါတယ်ကွာလို့ စောဒကနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့.. ဖုန်း model လေး တစ်ခု၊ နှစ်ခုလောက်အတွက်ပါ။ ပြီးတော့ MIUI Ver, Android Ver ကလည်း ခဏ ခဏ တက်ပေးနေတာပါ။ TWRP ဆိုတာ ဖုန်းစထွက်တာနဲ့ တစ်ခုထွက်.. အဲသည်ဖုန်း End of Support ဖြစ်သွားသည်ထိ သည်တစ်ခုနဲ့သာ အကုန်အဆင်ပြေဆိုတာမျိုးလဲမဟုတ်ပါဘူး။ သည်တော့ TWRP သည် ARB နဲ့ပတ်သက်လို့ ယုံကြည်စရာအရာ မဟုတ်ပါဘူး။
သည်တော့ အချုပ်ပြောရရင် fastboot ကနေ Official rom တင်တာသည် Mi Flash နဲ့ပဲတင်တင်.. Mi Flash မသုံးပဲ တင်တင် ARB ကိစ္စ ပူစရာ မလိုပါဘူးပေါ့။ တင်ဖို့သာ လုပ်လိုက်၊ ARB နဲ့ error ဖြစ်စရာရှိရင် သူမတင်ဘူးဆိုလို့ မှတ်ယူထားနိုင်တာပေါ့။ အထက်မှာပြောပြသလိုတွေ စစ်ကြည့်တာတွေ လုပ်ထားတော့လဲ ဘယ် rom version မှာတော့ arb နံပါတ် ဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီ။ xiaomi က arb နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေ ဘယ်လိုလုပ်ထားတယ် စတာမျိုးလေးတွေကို knowledge အနေနဲ့ သိထားနိုင်တာပေါ့ခင်ဗျာ။ အဓိက မှတ်ဖို့ကတော့ China version ဖုန်းတွေကို အခြား rom type ပြောင်းတင်ရင် Boot loader lock လုံးဝပြန်ဖြစ်အောင် မလုပ်မိစေဖို့ပါပဲ။
ကဲ firmware ချိန်းတင်တာလေး လုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်..။ သည် blog ထဲမှာ Mi Flash မသုံးပဲ flash_all.bat လေးပြင်တင်တာ ရေးပေးထားပါတယ်။ အခုလဲ Mi Flash မသုံးပဲ flash_all.bat လေးကိုပဲ သုံးတင်တာ လုပ်မှာပါပဲ။ ပြင်တော့ မပြင်တော့ပါဘူး။ တစ်ခုပဲ ပြင်လိုက်ပါမယ်။ ဒါလည်း အဲသည်နေရာရောက်ရင် OK ပြီ။ Finished တယ်လို့ ကိုယ့်အနေနဲ့ သတိထားမိအောင်ပါ။ Mi Flash နဲ့ကတော့ UI ပါတော့ OK တယ်၊ Error ဖြစ်တယ် မြင်ရတာပေါ့။ Tool မသုံးပဲတင်တာကတော့ တင်ပြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်.. တင်နေတဲ့နေရာ တစ်ဝက်တစ်ပျက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ထွက်သွားရင် command prompt windows ပိတ်သွားတော့ ဘာဖြစ်သွားမှန်း မသိဘူးဖြစ်တာပေါ့။ သည်တော့ စစချင်းမှာထွက်ရင် ARB အဆင်မပြေလို့ ထွက်တယ် မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စစချင်း လိုင်းတွေမှာ arb စစ်တာတွေလေ။ firmware file တွေရေးပြီဆိုရင်တော့ ကြာပါတယ်။ command prompt ကပေါ်နေမှာပါပဲ။ ကိုယ်ကြည့်နေလို့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး ပြီးရင် အိုကေလားလို့ သိရအောင်လေးအတွက်သာ flash_all.bat ထဲ cmd လေးတစ်ခုထည့်ထားပြီး save လုပ်ပါ။
အောက်ဆုံးက fastboot reboot ဆိုတဲ့လိုင်းအပေါ်မှာ pause ဆိုတာလေး ထည့်လိုက်ပြီးသာ save လုပ်ထွက်လိုက်ပါ။ ကျန်တာ ဘာမှမဖျက် မပြင်ပါဘူး။ ပြီးရင် မိမိတို့ Boot loader unlock tool ဖြည်ထည့်ထားတဲ့ folder ထဲက fastboot.exe ဆိုတဲ့ file လေးကို flash_all.bat လေးရှိနေတဲ့ folder ထဲ (rom folder ထဲ) ကူးထည့်ထားလိုက်ပါ။ ဒါက ပို safe ဖြစ်အောင်လုပ်ယူတဲ့သဘောပါ။ How to unlock boot loader post ထဲကအတိုင်း ပြင်ဆင်ထားရင် firmware ရေးဖို့ အဆင်ပြေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် xiaomi ph တွေအတွက် အချို့ adb, fastboot option တွေက xiaomi က adb, fastboot exe file တွေနဲ့သာ ပို match ဖြစ်ပါတယ်။ ဉပမာ adb ကနေ factory reset ချတာမျိုးက xiaomi ph တွေအတွက် xiaomi adb.exe ထဲမှာသာ support တာပါ။ google ရှာရလာတဲ့ adb.exe က လုပ်မပေးပါဘူး။ အချို့ firmware ရဲ့ sparse img file တွေ ခွဲရေးရာမှာ block size တွေယူရာမှာလည်း google က ရှာထည့်ထားတဲ့ fastboot.exe က အဆင်မပြေတာလေးတွေဖြစ်တတ်တော့ သူ့ဖုန်းနဲ့ သူ့ file တွဲထားပေးပြိးသုံးတဲ့သဘောပါပဲ။
ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ph ကို fastboot mode ဝင်၊ ကွန်ပျူတာမှာကြိုးထိုး၊ မိမိဖာသာ ကွန်ပျူတာက ဖုန်းကို fastboot မှာသိရဲ့လားလို့ စစ်ချင်ရင် command prompt ဖွင့်ပြီး fastboot devices ရိုက်လို့ စစ်ကြည့်။ အိုကေရင်တော့ flash_all.bat လေးကို Double click သာ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ firmware တင်သွားပါလိမ့်မယ်။ တင်နေချိန်ကတော့ ငါးမိနစ်နဲ့ ဆယ်မိနစ်ကြား အနဲဆုံးကြာတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းပြီးလို့ နောက်ဆုံးရောက်ရင်တော့ pause ဆိုတဲ့လိုင်းကို အလုပ်လုပ်ပြီး Key တစ်ခုခုနှိပ်ပါလို့ပြနေတာတွေ့မှာပါ။ ဒါကျနော်တို့ ရေးစရာရှိတာတွေရေးပြီးရင် reboot မလုပ်ခင် ခဏလေး pause ခိုင်းထားတာပါ။ သည်နေရာရောက်တာ အပေါ်ကဟာတွေ အကုန်ရေးလို့အဆင်ပြေပြီသဘောပါ။ မပြေရင် မပြေတဲ့လိုင်းနေရာ ထွက်မှာပါ။ Key တစ်ခုခု နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဖုန်းက reboot ဖြစ်ပြီး ROM အသစ်တက်လာပါလိမ့်မယ်။
MIUI Version နေရာကိုကြည့်ပါက PGGIDXM သည် Indo rom ပါ။ PGGINXM သည် India rom ပါ။ PGGEEAXM သည် EU rom ပါ။ PGGRUXM က Russia rom ပါ။ PGGMIXM သည်ကတော့ Global rom ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တာကလည်း Global rom ပါပဲ..။ သို့သော် သက်ဆိုင်ရာ region ပေါ်မူတည်လို့ customization လေးတွေ ကွဲပြားတာရှိမှာပေါ့။ PGGCNXM ကတော့ China rom ပါပဲခင်ဗျာ။
Mi Flash Tool နဲ့ပဲ တင်မယ်ဆိုရင်တော့ သည် Blog ထဲက post မှာ ဘယ်လိုတင်ရမယ်ဆိုတာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ မခက်ပါဘူး။ ROM folder path ရွေးပေးမယ်။ Clean All ထားမယ်။ China version ကို အခြား rom type ပြောင်းတာဖြစ်လို့ Clean All and Lock လုံးဝ မထားရ ဆိုတာလေး ထပ်သတိပြုပါ။ ဖုန်းချိတ်မယ်။ Flash မယ်ပါပဲ။ Mouse လေးနဲ့ Click လုပ်သွားရုံပါ။ Mi Flash tool ကတော့ up to date ဖြစ်တာလေးကို ရှာဖွေထားဖို့လိုမှာပေါ့။ လင့်မှာပေးထားတာကတော့ အဲသည်အချိန်က latest တွေဆိုပေမယ့် အခုတော့ old ver ဖြစ်နေလောက်ပါပြီ 😀 Post ထဲမှာတော့ အဲသည်အချိန်အခါက ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေ၊ တင်လို့ရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အစုံပါအောင် ရေးထားတော့ အခုအချိန်မှာ အချို့ဟာတွေ ကျော်ဖတ်ပေါ့ခင်ဗျာ။ ဉပမာ EDL လိုဆိုတာမျိုးတွေ ကြည့်မနေနဲ့တော့ပေါ့ 😀 Fastboot mode ကနေ တင်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလောက်က ပုံလေးတွေ ကြည့်လိုက်ရင်ပဲ လုံလောက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။
အပိုင်း တစ် ကို သည်နေရာ ရပ်ပြီး TWRP, Root နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေအတွက် အပိုင်း နှစ် မှာ ဆက်တာပေါ့ခင်ဗျာ.
MIUI Fans များ စိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ…။ 🙂
Published in Boot Loader Unlock, Firmware, General Tips and Root
အကိုရေ global rom ချိန်းလိုက်တာ အကိုပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားပြီ..ကူညီပါဦး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Boot loader unlock နောက်တစ်ခါ ထပ်လုပ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ